Zuva: 8 October 2019
Nzvimbo dzekuma mobile dziri kuvakwa paSalim Dervişoğlu Street, iri imwe nzira kuenda kuD-100 nzira huru, uko kune zvifambiso zvevoruzhinji kuenda kumatunhu eKocaeli's Karamürsel, Gölcük neBaşiskele. Vaperekedzi vekutakura vanhu [More ...]
Ankara Meya Mansur Yavaş, uyo anoteerera inzwi revadzidzi uye anoteerera zvavanoda, anoenderera mberi nekutora sarudzo zvinofadza vadzidzi. Ne chirevo "Guta rinodzidziswa nevadzidzi guta rine rutsigiro geçiren, raita mabasa anobatsira hupfumi hwevadzidzi munzvimbo dzakawanda kubva kumabhiriji emvura kuenda kune chekufambisa." [More ...]
Kubva pane "Rail System" musangano wakarongwa neIMM mayuniti, zvakasarudzwa kuti zviwedzere kukurumidza mari yekudyara uye kutarisisa hunyanzvi hwekugadzira dzimba. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Rail System Dhipatimendi yakaronga Sistem Rail System ıyla musangano pamwe nekutora chikamu kwevadzidzi kubva kumayunivhesiti akasiyana siyana. Kutaura kwekuvhura kwemusangano [More ...]
Mukati mechikamu chebasa rezvemagariro rakarongwa zvakabatana pamwe neEskişehir Metropolitan Municipality uye Özel ğağdaş Zvikoro, vadzidzi ve42 vakaverenga mabhuku kumatangi ane chirevo chekuti 'Kuverenga chiitiko chazvino'. Kuitira kupa vanhu tsika yekuverenga mabhuku mukufambisa kwevanhu vese, [More ...]
AFRAY Yakapera Kuongororwa, Tender Project
Meya Mehmet Zeybek'in AFRAY chirongwa, icho chimwe chezvipikirwa zvesarudzo uye zvidzidzo zvakapa mhedzisiro. Meya Zeybek akaudza ODAK, kon AFRAY's ithenda yeprojekiti ichaitwa muna Gumiguru. Mufaro wekugovera evhangeri ino vagari vangu [More ...]
Meya weAntalya Metropolitan Municipality Muhittin Böcek, Antalya, akaronga, mitemo, kuzivikanwa inoramba ichishanda nechinangwa chekugadzira guta. Muchirevo chechinyorwa ichi, basa ratanga pane kuvaka patsva iyo Yezvekufambisa Master Planning yekuvhara dunhu rose re19. Meya wedunhu reMetropolitan [More ...]
Muchokwadi, sürpriz Hazvishamisi kune avo vanonyatsotevera. Nekudaro, kubviswa kwe thenda ratakapfuura zuro kunoonekwa senge kwakanzverwa. Chinyorwa: TCDD 3 Tender yeBursa-Osmaneli High Speed ​​Chitima Project musi waApril 2018 [More ...]
CHP Karabük Provincial Chairman Abdullah Cakir, Rail Technologies Institute inofanirwa kuvakwa muKarabuk, akadaro. Provincial Chairman Cakir, Rail Transport Technologies Institute yakati guta rakaonekwawo. Kerpe, Turkey kuti simbi uye simbi zvinodiwa chiremera yokurarama kwemakore akawanda, nyika [More ...]
Heano ese mitengo inokwira! .. New Motsava Fees, Bridge uye YHT Fees. Magetsi, magasi echisikigo makumbo haagone kupona nekushamisika kwevagari; mugwagwa mukuru uye mabhiri ekudonsa, YHT uye vatengesi vezvitima matiketi, mari yepositi yakazungunuswa nemutengo unowedzera. Highway, chitima [More ...]
Ithenda yakaitwa neKayseri Metropolitan Municipality yekurenda kwenzvimbo dzekushambadzira mumatanda ematiresi nematende anotenderera nemabhazi uye nemotokari dzechitima munzira yechitima njanji yegore re6. Kayseri Metropolitan Municipality ne njanji nzira nzira catenary matanda uye [More ...]
Artova, Bekdiğin, Suluova, Turhal uye Yeşilyurt Zviteshi Panel Type Export Wall Work Inosangana neiyo Railway Nhau uye Dzimwe Nhau Unogona Kuve Unofarira InRayHaber 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Mune yedu system, chero zuva re25.01.2019 [More ...]
Meya weDüzce, uyo akagadzirira chirongwa cheIstanbul Street. Faruk Özlü, akasundira mabhatani ekuitwa kweiyo chirongwa chitsva. Iyo itsva matatu-nzira chirongwa mumugwagwa chinozotanga kubvisa tram njanji. Nekuti izvi [More ...]
Kayseri Metropolitan Municipality inoenderera ichisimudzira nhoroondo uye zvakasikwa zveKayseri, kunyanya Erciyes Winter Tourism Center. Meya wedunhu reMetropolitan Memduh Büyükkılıç akasangana nevashanyi vekuUkraine ku Erciyes. Nebasa reMetropolitan Municipality, chiUkraine kushanya [More ...]
7 yakarongedzwa muKonya Science Center ine dingindira re "Sei To, How Rinoshanda yıl. Konya Science Festival yakashanyirwa nevanhu zviuru zana nemakumi mashanu. Konya Metropolitan Municipality basa ne TUBITAK akatsigira rokutanga sayenzi centre Turkey muna Konya Science [More ...]
IMBB Tourism Development 'Dudziro Signage' Chikumbiro. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) yatanga chirongwa chitsva kuitira kuwedzera huwandu hwevashanyi vanouya kuguta nekubatsira vashanyi vekunze. Kunyanya mune yepamberi nhoroondo uko vashanyi vekunze vanouya [More ...]
IETT yakauya padanho rekupedzisira mune bvunzo dzine chekuita ne "Safe Driving uye Telemetry System veren, inopa vatyairi nekukurumidza kunyeverwa. Iine sisitimu inoshandiswa kuMetrobus nzira, inotevera nzira nekumhanyisa munzira. Mumwe wemabatanidzwa eIstanbul Metropolitan Municipality (IMM) [More ...]
Nhoroondo Nhasi 8 October 1892 Kubvumirana kwemutsetse unozobatana neTeconiki-Mitrovica mutsara we Karasulu kuti utange muFercik uye upfuure neKomotini uye Dhiramu yakapiwa kuFrance René Bauda-uy, mubhadhari muIstanbul. 1 October mutsara unotanga pa 1893 1 April pa 1896 [More ...]